Mahia, Hawke's Bay, i-New Zealand
Le ndawo yokuhlala ezimele itholakala esitezi esiphansi sendlu enamazinga amabili. Indawo yokuhlala evulekile ehlangene inendawo yokugeza yangasese yangasese kanye negumbi lokulala elinombhede olingana nendlovukazi. Lokhu kungafanela umbhangqwana noma umhambi oyedwa.
Ibanga elilula lemizuzu emi-5 lokuhamba ngezinyawo ukuya ogwini, isitolo sasendaweni, esiphakela izinkukhu namashibhisi kusukela ngo-9am kuya ku-6pm nsuku zonke kanye nethaveni nayo inokudla.
Indawo enhle emaphakathi lapho ungahlola khona izimangaliso ze-Mahia Peninsula.
Kukhona inketho yokukhipha umbhede kasofa ongakhululekile ekamelweni lokuhlala, ngingabeka i-swab eyodwa yegwebu phezulu ukuze ngiyenze ibe ntofontofo, uma kudingeka.
Izilwane ezifuywayo zamukelekile, kodwa sicela uphathe umata wazo wokulala futhi uqinisekise ukuthi uyazihlanza. Ngiyakucela ngenhlonipho ukuthi ugcine isilwane sakho esifuywayo singafaki ifenisha, ikakhulukazi umbhede. Inkokhelo eyengeziwe engu-$10 yesilwane sakho esifuywayo.
I-Camper van inobungane. $10.00 umuntu ngamunye owengeziwe ubusuku ngabunye
Isampula yalokho indawo engakunikeza:
Uhambo lwasehlathini lwendabuko
Kufanele bakhuphuke igquma laseMokotahi
Hlola ukwakheka kwamatshe okuthakazelisayo ogwini phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo.
Inkundla yegalofu edume umhlaba wonke "eMahia".
Amabhishi amahle ahamba ngezinyawo
Ibhayisikili elimangalisayo lamahora angu-2 ukugibela ogwini, engikwenzayo ngezikhathi ezithile.
Ithuba lokuzwa ukuthi abantu bendawo babamba kanjani ama-crayfish.
Amanye amakhefu ama-surf amangalisayo
Noma vele uphumule futhi uphumule.
Sihlala phezulu futhi siyatholakala uma udinga noma yini.
Hlola ezinye izinketho ezise- Mahia namaphethelo